စေတန် ၅ - ဝီကီပီးဒီးယား
၃၆၃.၀ ft (၁၁၀.၆ m)
၃၃.၀ ft (၁၀.၁ m)
၆,၅၄၀,၀၀၀ lb (၂,၉၇၀,၀၀၀ kg)
LEO (၉၀ nmi (၁၇၀ km), 30° inclination) သို့ ကုန်တင်ဝန်
၃၁၀,၀၀၀ lb (၁၄၀,၀၀၀ kg)[note ၁]
TLI သို့ ကုန်တင်ဝန်
၁၀၇,၁၀၀ lb (၄၈,၆၀၀ kg)
1 (အပိုလို ၆)
November 9, 1967 (AS-501[note ၂] အပိုလို ၄)
၁၃၈.၀ ft (၄၂.၁ m)
၂၈၇,၀၀၀ lb (၁၃၀,၀၀၀ kg)
၅,၀၄၀,၀၀၀ lb (၂,၂၉၀,၀၀၀ kg)
၇,၈၉၁,၀၀၀ lbf (၃၅,၁၀၀ kN) sea level
၂၆၃ second (၂.၅၈ kilometres per second) sea level
၈၁.၅ ft (၂၄.၈ m)
၈၈,၄၀၀ lb (၄၀,၁၀၀ kg)[note ၃]
၁,၀၉၃,၉၀၀ lb (၄၉၆,၂၀၀ kg)[note ၃]
၁,၁၅၅,၈၀၀ lbf (၅,၁၄၁ kN) vacuum
၄၂၁ second (၄.၁၃ kilometres per second) vacuum
၆၁.၆ ft (၁၈.၈ m)
၂၁.၇ ft (၆.၆ m)
၂၉,၇၀၀ lb (၁၃,၅၀၀ kg)[note ၄]
၂၇၁,၀၀၀ lb (၁၂၃,၀၀၀ kg)[note ၄]
၂၂၅,၀၀၀ lbf (၁,၀၀၀ kN) vacuum
Saturn V သည် ၁၉၆၇ ခုနှစ်မှ ၁၉၇၃ ခုနှစ်အတွင်း NASA မှအသုံးပြုခဲ့သော အမေရိကန်လူသားအဆင့်သတ်မှတ်ချက် super heavy-lift လွှတ်တင်ယာဉ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အဆင့်သုံးဆင့်ပါဝင်သည်။ Apollo ပရိုဂရမ်ကို လပေါ်လူသားများစူးစမ်းလေ့လာရေးအတွက် ပံ့ပိုးရန်တီထွင်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ပထမဆုံးအမေရိကန်အာကာသစခန်းဖြစ်သော Skylab ကိုလွှတ်တင်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ Saturn V ကို Kennedy အာကာသစခန်းမှ ၁၃ ကြိမ်လွှတ်တင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးလေယာဉ်အမှုထမ်းများနှင့်ဝန်ပိမှုမရှိပါ။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှစ၍ Saturn V သည်အမြင့်ဆုံး၊ အလေးဆုံး၊ အားအပြင်းဆုံး (အမြင့်ဆုံးစွမ်းအား) ဒုံးပျံကိုစစ်ဆင်ရေးအဆင့်သို့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီး၎င်းသည်အမြင့်ဆုံးလွှတ်တင်ခဲ့သည့်အမြင့်ဆုံးနှင့်ကမ္ဘာအ ၀ န်းဆုံးပတ် ၀ န်းကျင် (LEO) မှ ၃၁၀,၀၀၀ အထိအမြင့်ဆုံး၊ တတိယအဆင့်နှင့် Apollo command နှင့် service module နှင့် Lunar Module ကို Moon သို့လွှတ်ရန်တတိယအဆင့်နှင့်မလောင်ကျွမ်းနိုင်သော propellant အပါအ ၀ င် lb (၁၄၀၀၀၀ ကီလိုဂရမ်) ပါဝင်သည်။ Saturn V ဒုံးပျံများ၏အကြီးဆုံးထုတ်လုပ်မှုပုံစံအဖြစ် Saturn V ကို Wernher von Braun ၏ Huntingville, Alabama ရှိ Marshall Space Flight Center ၌ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ပြီး Boeing၊ မြောက်အမေရိကလေကြောင်း၊ Douglas လေယာဉ်ကုမ္ပဏီနှင့် IBM ကဲ့သို့ ဦး ဆောင်ကန်ထရိုက်များ။
ယနေ့အချိန်ထိ Saturn V သည်ကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းအနိမ့်ထက်ကျော်လွန်သောလူသားများကိုသယ်ဆောင်ရန်တစ်ခုတည်းသောလွှတ်တင်ယာဉ်ဖြစ်သည်။ ပျံသန်းနိုင်သောယာဉ်စုစုပေါင်း ၁၅ စီးကိုတည်ဆောက်ခဲ့သော်လည်း ၁၃ စီးသာပျံသန်းနိုင်ခဲ့သည်။ မြေပြင်စမ်းသပ်မှုများအတွက်နောက်ထပ်မော်တော်ယာဉ်သုံးစီးကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ၁၉၆၈ ဒီဇင်ဘာမှ ၁၉၇၂ ဒီဇင်ဘာအထိလေးနှစ်တာကာလအတွင်းအာကာသယာဉ်မှူး ၂၄ ဦး ကိုလပေါ်သို့လွှတ်တင်ခဲ့သည်။
၁.၁ စေတန် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
၂.၁ S-II ဒုတိယဆင့်
၂.၃ Range ဘေးကင်းလုံခြုံမှု
၇ Proposed post-Apollo developments
၈ Proposed successors
၁၀ Saturn V vehicles and launches
၁၀.၁ Saturn V displays
၁၀.၂ Saturn V displays
၁၉၄၅ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတွင်အမေရိကန်အစိုးရသည် ဂျာမန်ဒုံးပျံနည်းပညာရှင် Wernher von Braun နှင့်သမ္မတ Truman တို့၏ခွင့်ပြုချက်အစီအစဉ်ဖြစ်သော Operation Paperclip အတွက် အမေရိကန်သို့ ခေါ်ဆောင်လာခဲ့သည်။ Von Braun သည် V-2 ဒုံးပျံဖန်တီးခြင်းအတွက် သူ၏တိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်မှုကြောင့် တပ်မတော်၏ ဒုံးပျံဒီဇိုင်းဌာနခွဲတွင်တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသည်။ ၁၉၄၅ နှင့် ၁၉၅၈ ကြားတွင်သူ၏လက်ရာများသည် V-2 ၏နောက်ကွယ်မှ စိတ်ကူးများနှင့်နည်းလမ်းများကို အမေရိကန်အင်ဂျင်နီယာများသို့တင်ပြရန် ကန့်သတ်ထားသည်။ von Braun ၏ အာကာသဒုံးပျံ အနာဂတ်အကြောင်းဆောင်းပါးများစွာ ရှိသော်လည်း အမေရိကန်အစိုးရသည် ၎င်းတို့၏ Vanguard ဒုံးကျည်များကို ငွေကုန်ကြေးကျများစွာရှုံးနိမ့်ခဲ့သော်လည်း စမ်းသပ်ရန် လေတပ်နှင့် ရေတပ်ဒုံးပျံအစီအစဉ်များကို ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ အမေရိကန်စစ်တပ်နှင့်အစိုးရတို့သည် ၁၉၅၇ တွင်အမေရိကန်များ အာကာသသို့စေလွှတ်ရန်အလေးအနက်ထားသောခြေလှမ်းများကို ဆိုဗီယက်တို့က Sputnik 1 ကိုပစ်လွှတ်ခဲ့ပြီး R-7 ICBM ကို US သို့သယ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ သူတို့သည် Jupiter ဒုံးပျံများကိုဖန်တီးပြီးစမ်းသပ်ခဲ့ကြသော von Braun အဖွဲ့ကိုလှည့်ကြည့်ကြသည်။ Juno I ဒုံးပျံသည် ၁၉၅၈ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတွင်ပထမဆုံး အမေရိကန်ဂြိုဟ်တုကို လွှတ်တင်ခဲ့ပြီး NACA (NASA ၏ရှေ့က) အာကာသပြိုင်ပွဲ၌ပါဝင်ရန်နောက်ဆုံးအစီအစဉ်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Von Braun က ဂျူပီတာစီးရီးများကို ရှေ့ပြေးပုံစံအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး ၎င်းကို“ မွေးကင်းစကလေးစေတန်” ဟုရည်ညွှန်းသည်။
စနေဂြိုဟ်အစီအစဉ်ကိုဂျူပီတာဂြိုဟ်နောက်လာမည့်ဂြိုဟ်အတွက်အမည်ပေးထားသည်။ ၎င်း၏ဒီဇိုင်းသည်ဂျူပီတာစီးရီးဒုံးပျံများ၏ဒီဇိုင်းများမှဆင်းသက်လာသည်။ ဂျူပီတာစီးရီးများ၏ အောင်မြင်မှုသည်ထင်ရှားလာသည်နှင့်အမျှ စေတန်စီးရီးများပေါ်ထွက်လာသည်။ ၁၉၆၀ မှ ၁၉၆၂ ခုနှစ်အတွင်း Marshall Space Flight Center (MSFC) သည်ကမ္ဘာပတ်လမ်း (သို့) လကမ္ဘာမစ်ရှင်အမျိုးမျိုးအတွက် ဖြန့်ကျက်နိုင်မည့်စေတန်ဒုံးကျည်များကို ဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့သည်။ NASA သည် Saturn C-3 ကိုကမ္ဘာပတ်လမ်းဆုံ (EOR) နည်းလမ်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုရန်စီစဉ်ထားပြီး အနည်းဆုံးလလေးကြိမ်လွှတ်တင်ရန် လိုအပ်သည်။ သို့သော် MSFC သည်၎င်း၏ပထမအဆင့်တွင် F-1 အင်ဂျင်လေးလုံး သုံး၍ ပိုမိုကျယ်သော C-4 ဒုတိယအဆင့်နှင့် S-IVB ကို J-2 တစ်လုံးတည်းဖြင့်အဆင့်မြင့် S-IVB ကိုစီစဉ်ခဲ့သည်။ အင်ဂျင်သည်၎င်း၏တတိယအဆင့်အဖြစ် C-4 သည် EOR လကမ္ဘာခရီးစဉ်ကို ထမ်းဆောင်ရန်ပစ်လွှတ်ရန်နှစ်ကြိမ်သာလိုပါလိမ့်မည်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် NASA သည် C-5 တည်ဆောက်မည့်အစီအစဉ်ကိုကြေညာခဲ့သည်။ အဆင့်သုံးဒုံးပျံတွင် S-IC ပထမအဆင့်၊ F-1 အင်ဂျင် ၅ လုံးပါ ၀ င်သည်။ J-2 အင်ဂျင် ၅ လုံးပါသော S-II ဒုတိယအဆင့်၊ J-2 အင်ဂျင်တစ်ခုတည်းဖြင့် S-IVB တတိယအဆင့် C-5 ကိုလပေါ်သို့ပေါင် ၉၀၀၀၀ (၄၁၀၀၀ ကီလိုဂရမ်) တင်ဆောင်နိုင်မှုအတွက်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ C-5 သည်ပထမပုံစံမတည်ဆောက်မီကပင်အစိတ်အပိုင်းများကိုစမ်းသပ်ခံရလိမ့်မည်။ S-IVB တတိယအဆင့်ကို C-IB အတွက်ဒုတိယအဆင့်အဖြစ်သုံးမည်ဖြစ်ပြီး C-5 အတွက်အယူအဆနှင့်ဖြစ်နိုင်ချေကိုသက်သေပြရန်အတွက်ရော၊ C- ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ပါ အရေးပါသောပျံသန်းမှုအချက်အလက်များကိုလည်း ပံ့ပိုးပေးလိမ့်မည်။ ၅ ။ အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီအတွက်စမ်းသပ်ခံမယ့်အစား C-5 ဒုံးပျံရဲ့ပထမဆုံးစမ်းသပ်ပျံသန်းမှုမှာအဆင့်သုံးဆင့်လုံးပါ ၀ င်မယ်လို့ဆိုလိုတယ်။ အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကိုတစ်ပြိုင်နက်စမ်းသပ်ခြင်းအားဖြင့်လေယာဉ်အမှုထမ်းလွှတ်တင်မှုမတိုင်မီစမ်းသပ်ပျံသန်းမှုအနည်းငယ်သာလိုအပ်လိမ့်မည်။ ၁၉၆၃ ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် Apollo အစီအစဉ်အတွက် NASA ၏ C-5 ကိုရွေးချယ်ခဲ့ပြီး Saturn V. ဟုအမည်ပေးခဲ့ပြီး C-1 သည် Saturn I ဖြစ်လာပြီး C-1B သည် Saturn IB ဖြစ်လာခဲ့သည်။ Von Braun သည် MSFC မှအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို ဦး ဆောင်ပြီးအာကာသယာဉ်ကိုလသို့လွှတ်တင်နိုင်သောယာဉ်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ သူတို့က NASA ရဲ့စီရင်ပိုင်ခွင့်အောက်ကိုမပြောင်းခင် von Braun ရဲ့အဖွဲ့ကတွန်းအားကိုတိုးတက်အောင်လုပ်တယ်၊ ရှုပ်ထွေးမှုနည်းတဲ့လည်ပတ်မှုစနစ်ကိုဖန်တီးပြီးပိုကောင်းတဲ့စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီဇိုင်းတွေကိုစလုပ်ခဲ့တယ်။ ဤပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုများအတွင်းအဖွဲ့သည် V-2 ဒီဇိုင်း၏တစ်ခုတည်းသော အင်ဂျင်ကိုငြင်းပယ်ခဲ့ပြီး အင်ဂျင်မျိုးစုံဒီဇိုင်းသို့ ပြောင်းခဲ့သည်။ Saturn I နှင့် IB တို့သည်ဤပြောင်းလဲမှုများကို ထင်ဟပ်စေခဲ့သော်လည်း အာကာသယာဉ်ကိုလသို့စေလွှတ်ရန် လုံလောက်မှုမရှိပေ။ သို့သော်ဤဒီဇိုင်းများသည်နာဆာအားလပေါ်သို့လူသားတစ် ဦး ဆင်းသက်ရန်၎င်း၏အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကိုဆုံးဖြတ်နိုင်သည့်အခြေခံကိုပေးခဲ့သည်။ Saturn V ၏နောက်ဆုံးဒီဇိုင်းတွင်အဓိကသွင်ပြင်များစွာရှိသည်။ အကောင်းဆုံးအင်ဂျင်များသည် F-1s နှင့် J-2 ဟုခေါ်သောဟိုက်ဒရိုဂျင်တွန်းအားပေးစနစ်အသစ်တို့နှင့်ပေါင်းစပ်ပြီး Saturn C-5 ဖွဲ့စည်းမှုကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေခဲ့သည်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် NASA သည် von Braun's Saturn ဒီဇိုင်းများကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်၎င်း၏အစီအစဉ်များကိုအပြီးသတ်ခဲ့ပြီး Apollo အာကာသအစီအစဉ်သည်မြန်ဆန်လာသည်။ အပြီးသတ်ပြင်ဆင်မှုနှင့်အတူ NASA သည်မစ်ရှင်ပရိုဖိုင်းများကိုအာရုံစိုက်ခဲ့သည်။ အငြင်းပွားဖွယ်ရာအချို့ရှိနေသော်လည်း လကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းဆုံတွေ့မှုအတွက် လပတ်လမ်းကြောင်းဆုံရပ်တစ်ခုကို ကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းဆုံရပ်တစ်ခုတွင် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ လောင်စာဆီထိုးခြင်း၊ ခရီးအတွက်လိုအပ်သော လောင်စာဆီပမာဏနှင့်ဒုံးပျံထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များကဲ့သို့ကိစ္စများကိုဖြေရှင်းပြီး Saturn V အတွက်ဒီဇိုင်းများကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ Huntsville ရှိ von Braun's Marshall Space Flight Center မှဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့ပြီးဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ပြင်ပကန်ထရိုက်တာများကို Boeing (S-IC)၊ မြောက်အမေရိကလေကြောင်း (S-II)၊ Douglas လေယာဉ် (S-IVB) နှင့် IBM တူရိယာယူနစ်) ။
စီမံကိန်းအစောပိုင်းကာလများတွင် နာဆာသည် လသွားခရီးအတွက် ကမ္ဘာပတ်လမ်းမှချိန်၍ပစ်လွှတ်ခြင်း၊ တိုက်ရိုက်ဆင်းသက်ခြင်းနှင့် လပတ်လမ်းမှချိန်၍ပစ်လွှတ်ခြင်းဟူ၍ အစီအစဉ်သုံးမျိုးစဉ်းစားခဲ့သည်။ တိုက်ရိုက်ဆင်းသက်ခြင်းအတွက်မူ လမျက်နှာပြင်ပေါ်တိုက်ရိုက်ဆင်းသက်မည့် ဒုံးပျံကြီးကြီးတစ်ခုလိုသည်။ ကမ္ဘာပတ်လမ်းမှပစ်လွှတ်ရန်အတွက်မူ သေးငယ်သောအာကာသယာဉ်နှစ်စင်းပစ်လွှတ်ပြီး ကမ္ဘာပတ်လမ်းတွင်ချိတ်ဆက်စေနိုင်သည်။ လပတ်လမ်းမှပစ်လွှတ်ခြင်းအတွက်မူ အာကာသယာဉ်တစ်ခုနှင့်ယင်းအားတွန်းအားပေးမည့်ဒုံးပျံတစ်ခုသာလိုပြီး အာကာသယာဉ်၏အစိတ်အပိုင်းငယ်တစ်ခုကသာလျှင်လပေါ်ဆင်းသက်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုလဆင်းယာဉ်က ပင်မယာဉ်နှင့်ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပြီး အာကာသသူရဲများကမ္ဘာသို့ပြန်လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
LOR သည်အန္တရာယ်ပိုများသောရွေးချယ်စရာတစ်ခုအဖြစ် NASA ကပယ်ချခဲ့ပြီး၎င်းသည်ကမ္ဘာပတ်လမ်းတွင်တွေ့ဆုံမှုမပြုလုပ်ရသေးပါ၊ ၎င်းသည်လကမ္ဘာပတ်လမ်းတွင်အလွန်နည်းပါးသည်။ Langley Research Center မှအင်ဂျင်နီယာ John Houbolt နှင့် NASA အုပ်ချုပ်ရေးမှူး George Low တို့အပါအ ၀ င် NASA အရာရှိများသည် Lunar Orbit Rendezvous သည်လပေါ်သို့အရိုးရှင်းဆုံးဆင်းသက်မှု၊ ကုန်ကျစရိတ်အသက်သာဆုံးလွှတ်တင်ယာဉ်နှင့်ပြီးမြောက်ရန်အရေးအပါဆုံးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဆယ်စုနှစ်အတွင်းလပေါ်သို့ဆင်းသက်သည်။ အခြားနာဆာအရာရှိများကယုံကြည်ပြီး LOR ကို ၁၉၆၂ ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့တွင် Apollo အစီအစဉ်အတွက်မစ်ရှင်ပုံစံအဖြစ်တရားဝင်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
ဆေတန် ၅ ပုံ
ဆေတန် ၅ ၏အရွယ်အစားနှင့်တင်ဆောင်နိုင်သည့်ဝန်တို့သည် ထိုအချိန်ကပျံသန်းနေသည့်ဒုံးပျံများထက်များစွာကြီးမားသည်။ အပိုလိုအာကာသယာဉ်ကိုထိပ်ဖူးတွင်ထည့်သွင်းထားပြီးနောက် ဒုံးပျံကိုထောင်ထားချိန်တွင် ၃၆၃ ပေ (၁၁၁ မီတာ) မြင့်ပြီး အမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးရုပ်တုထက် ၅၈ပေပိုမြင့်သည်။ တောင်ပံများမပါဘဲနှင့်အချင်း၃၃ ပေ (၁၀ မီတာ)ရှိသည်။ လောင်စာဖြည့်တင်းပြီးချိန်တွင် အလေးချိန် in diameter. Fully fueled it hadatotal mass of 6.5 million pounds (3,000 metric tons) ရှိသည်။ တင်ဆောင်နိုင်သည့်ဝန်မှာ ကမ္ဘာပတ်လမ်းနိမ့် သို့၂၆၀,၀၀၀ ပေါင် (၁၂၀,၀၀၀ ကီလိုဂရမ်) ပို့နိုင်သည်။
Saturn V ၏အရွယ်အစားနှင့်ဝန်တင်နိုင်စွမ်းသည်အခြားယခင်ရော့ကက်များအားလုံးအောင်မြင်စွာပျံသန်းနိုင်ခဲ့သည်။ Apollo အာကာသယာဉ်သည်အပေါ်မှ ၃၆၃ ပေ (၁၁၁ မီတာ) မြင့်ပြီးအတောင်များကိုဂရုမစိုက်ဘဲအချင်း ၃၃ ပေ (၁၀ မီတာ) ရှိသည်။ လောင်စာဆီအားအပြည့်ရှိသော Saturn V သည်အလေးချိန်ပေါင် ၆.၅ သန်း (ကီလိုမီတာ ၂,၉၀၀,၀၀၀) ရှိပြီးမူလခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၂၆၁,၀၀၀ ပေါင် (၁၁၈,၀၀၀ ကီလိုဂရမ်) နိမ့်သောကမ္ဘာပတ်လမ်းမှဆွဲအားတင်နိုင်စွမ်းရှိသော်လည်းအနည်းဆုံးပေါင် ၉၀၀၀၀ (၄၁၀၀၀ ကီလိုဂရမ်) ကိုလသို့စေလွှတ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ နောက်ပိုင်းတွင်အဆင့်မြှင့်တင်မှုများသည်ထိုစွမ်းရည်ကိုတိုးတက်စေသည်။ နောက်ဆုံး Apollo lunar missions သုံးခုအတွင်း LEO သို့ပေါင် ၃၁၀၀၀၀ (ကီလို ၁၄၀၀၀၀) ခန့်ကိုတင်ခဲ့ပြီးလကမ္ဘာသို့ ၁၀၇,၁၀၀ ပေါင် (၄၈,၆၀၀ ကီလိုဂရမ်) အထိလွှတ်တင်ခဲ့သည်။ ၃၆၃ ပေ (၁၁၁ မီတာ) အမြင့်တွင် Saturn V သည် ၅၈ ပေ (၁၈ မီတာ) မြင့်သောလေဘာတီရုပ်တုမှမြေပြင်သို့မီးရှူးနှင့် Big Ben နာရီမျှော်စင်ထက် ၄၈ ပေ (၁၅ မီတာ) မြင့်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့် Freedom7ကိုပထမဆုံးအာကာသယာဉ်ပျံအာကာသယာဉ်တွင်အသုံးပြုခဲ့သော Mercury-Redstone Launch ယာဉ်သည် S-IVB စင်မြင့်ထက် ၁၁ ပေ (၃.၄ မီတာ) ခန့်ရှည်လျားပြီးပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ကိုတွန်းလွှတ်မှုအား (ပေါင် ၇၈၀၀၀ အင်အား (၃၅၀ kN)) Launch Escape System ဒုံးပျံထက် Apollo command module ပေါ်တွင်ပေါင် (၁၅၀၀၀၀) Apollo LES သည် Mercury-Redstone ထက် (၃.၂ စက္ကန့်နှင့် ၁၄၃.၅ စက္ကန့်) ပိုတိုသည်။ Saturn V ကိုအဓိကအားဖြင့် Alabama, Huntsville ရှိ Marshall Space Flight Center မှဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့သည်၊ တွန်းကန်ခြင်းအပါအ ၀ င်အဓိကစနစ်များကိုလက်ခွဲကန်ထရိုက်တာများကဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့သော်လည်း Stennis အာကာသစင်တာ၌စမ်းသပ်နေစဉ်အနီးရှိအိမ်ပြတင်းပေါက်များကိုရိုက် ခွဲ၍ အင်အားပြင်း F-1 နှင့် J-2 ဒုံးပျံအင်ဂျင်များကိုသုံးခဲ့သည်။ ဒီဇိုင်နာများသည် Saturn I program မှနည်းပညာကိုအတတ်နိုင်ဆုံးသုံးရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် Saturn V ၏ S-IVB-500 တတိယအဆင့်သည် Saturn IB ၏ S-IVB-200 ဒုတိယအဆင့်ကိုအခြေခံသည်။ Saturn V ကိုထိန်းချုပ်သောတူရိယာယူနစ်သည် Saturn IB မှသယ်ဆောင်လာသည့်လက္ခဏာများနှင့်ဝေမျှသည်။ Saturn V ကိုအလူမီနီယမ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည်။ ၎င်းကိုတိုက်တေနီယမ်၊ polyurethane၊ cork နှင့် asbestos တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ အသေးစိတ်အစီအစဉ်များနှင့်အခြား Saturn V အစီအစဉ်များကို Marshall Space Flight Center တွင် microfilm ပေါ်တွင်ရရှိနိုင်သည်။
S-IC ခွဲခွာပြီးနောက် S-II ဒုတိယအဆင့်သည် ၆ မိနစ်ခန့်လောင်ကျွမ်းပြီးကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းနှင့် ၁၀၉ မိုင် (၁၇၅ ကီလိုမီတာ) နှင့် ၁၅၆၄၇ မိုင် (၂၅၁၈၁ ကီလိုမီတာ/နာရီ) အထိတွန်းပို့ခဲ့သည်။ ပထမ ဦး စွာမဖွင့်ရသေးသောပစ်လွှတ်မှုနှစ်ခုအတွက် S-II အဆင့်ကိုအရှိန်မြှင့်ရန်လေးစက္ကန့်ကြာလောင်ကျွမ်းစေသောမော်တာရှစ်လုံးသည် J-2 အင်ဂျင်ငါးလုံးကိုလောင်ကျွမ်းစေခဲ့သည်။ ပထမဆုံး Apollo မစ်ရှင်ခုနစ်ခုအတွက် S-II တွင်မော်လ်တာမော်တာလေးလုံးသာအသုံးပြုခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးလွှတ်တင်မှုလေးကြိမ်အတွက်၎င်းတို့အားလုံးလုံးဖယ်ရှားပစ်ခဲ့သည်။ ပထမအဆင့်ခွဲပြီးနောက်စက္ကန့် ၃၀ ခန့်၊ ကြားအဆင့်လက်စွပ်သည်ဒုတိယအဆင့်မှကျဆင်းသွားသည်။ ၎င်းသည်ဆွဲငင်အား၏ဗဟိုချက်အနီးတစ်ဝိုက်ကို ဦး တည်ချက်မဲ့သောသဘောထားဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကြားဖြတ် J-2 အင်ဂျင်များမှ ၃ ပေ ၃ လက်မ (၁ မီတာ) သာရှိသောကြားကာလသည်၎င်းတို့အားမတိုက်ဘဲသန့်ရှင်းစွာလဲကျလိမ့်မည်။ S-IC နှင့်တွဲလျှင် J-2 အင်ဂျင်နှစ်ခုပျက်စီးနိုင်သည်။ ကြားကာလခွဲခွာပြီးမကြာမီ Launch Escape System သည်လည်းအရှိန်ပြင်းလာသည်။
Apollo6ကြားမှအဝေးသို့ပြုတ်ကျသွားသည်။ S-II အဆင့်မှအင်ဂျင်အိတ်ဇောသည်ကြားဖြတ်ရိုက်ခတ်မှုကြောင့်တောက်ပသည်။ ဒုတိယအဆင့်စက်နှိုးပြီးနောက် ၃၈ စက္ကန့်ခန့်တွင် Saturn V သည်ကြိုတင်အစီအစဉ်ဆွဲထားသောလမ်းကြောင်းမှ "ပိတ်ထားသော loop" သို့ Iterative Guidance Mode သို့ပြောင်းခဲ့သည်။ ယခုအခါ၎င်းကိရိယာအား ၎င်း၏ပစ်မှတ်ပတ်လမ်းဆီသို့အသက်သာဆုံးလမ်းကြောင်းအဖြစ်အချိန်နှင့်တပြေးညီတွက်ချက်ပေးခဲ့သည်။ အကယ်၍ တူရိယာယူနစ်မအောင်မြင်လျှင် Saturn ၏ထိန်းချုပ်မှုကို command module ၏ကွန်ပျူတာသို့ပြောင်း။ လက်ဖြင့်ထိန်းချုပ်ခြင်း (သို့) ပျံသန်းခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းနိုင်သည်။ ဒုတိယအဆင့်မဖြတ်မီ စက္ကန့် ၉၀ ခန့်တွင် longitudinal pogo oscillations ကိုလျှော့ချရန် ဗဟိုအင်ဂျင်သည် ပိတ်သွားသည်။ ဤအချိန်တစ်ဝိုက်တွင် LOX စီးဆင်းမှုနှုန်းကျဆင်းသွားပြီး propellants နှစ်ခု၏အချိုးကိုပြောင်းလိုက်ပြီးဒုတိယအဆင့်ပျံသန်းမှုအဆုံးတွင်တင့်ကားများတွင်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော propellant အနည်းငယ်သာကျန်ရှိတော့ကြောင်းသေချာစေခဲ့သည်။ ၎င်းကိုကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော delta-v တွင်ပြုလုပ်သည်။ S-II propellant tank တစ်ခုစီ၏ အောက်ခြေရှိအဆင့်ငါးဆင့်အာရုံခံကိရိယာများသည် S-II ပျံသန်းစဉ်တွင်လက်နက်တပ်ဆင်ထားပြီး၎င်းတို့နှစ် ဦး အား S-II ဖြတ်တောက်မှုနှင့်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဒုတိယအဆင့်ပြတ်ပြီးနောက်တစ်စက္ကန့်ပိုင်းခြားသွားပြီးစက္ကန့်ပိုင်းအကြာတတိယအဆင့်မီးတောက်သွားသည်။ S-IIB ထိပ်မှကြားကြားတွင်တပ်ဆင်ထားသောအစိုင်အခဲလောင်စာသုံး retro-rocket များသည် S-IVB မှကျောထောက်နောက်ခံ ပြု၍ ပစ်ခတ်သည်။ S-II သည်ပစ်လွှတ်သည့်နေရာမှမိုင် ၂,၆၀၀ (ကီလိုမီတာ ၄,၂၀၀) ခန့်ကိုထိခိုက်ခဲ့သည်။ Apollo 13 မစ်ရှင်တွင် စက်အတွင်းပိုင်းအင်ဂျင်သည် အဓိက pogo တုန်ခါမှုဒဏ်ကိုခံလိုက်ရပြီး အစောပိုင်းအလိုအလျောက်ဖြတ်တောက်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ လုံလောက်သောအမြန်နှုန်းရောက်ရန်ကျန်ရှိသောအင်ဂျင်လေးလုံးသည်စီစဉ်ထားသည်ထက်ပိုမိုကြာရှည်စွာလည်ပတ်နေခဲ့သည်။ pogo နှိမ်နင်းသူကိုနောက်ပိုင်း Apollo မစ်ရှင်များတွင်တပ်ဆင်ခဲ့သည်၊ သို့သော်အစောပိုင်းအင်ဂျင် ၅ လုံးဖြတ်တောက်မှုသည် g-force ကိုလျှော့ချရန်ကျန်ရှိခဲ့သည်။S-IC ခွဲခွာပြီးနောက် S-II ဒုတိယအဆင့်သည် ၆ မိနစ်ခန့်လောင်ကျွမ်းပြီးကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းနှင့် ၁၀၉ မိုင် (၁၇၅ ကီလိုမီတာ) နှင့် ၁၅၆၄၇ မိုင် (၂၅၁၈၁ ကီလိုမီတာ/နာရီ) အထိတွန်းပို့ခဲ့သည်။ ပထမ ဦး စွာမဖွင့်ရသေးသော ပစ်လွှတ်မှုနှစ်ခုအတွက် S-II အဆင့်ကို အရှိန်မြှင့်ရန် လေးစက္ကန့်ကြာ လောင်ကျွမ်းစေသော မော်တာရှစ်လုံးသည် J-2 အင်ဂျင်ငါးလုံးကိုလောင်ကျွမ်းစေခဲ့သည်။ ပထမဆုံး Apollo မစ်ရှင်ခုနစ်ခုအတွက် S-II တွင်မော်လ်တာမော်တာလေးလုံးသာ အသုံးပြုခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးလွှတ်တင်မှုလေးကြိမ်အတွက် ၎င်းတို့အားလုံးလုံးဖယ်ရှားပစ်ခဲ့သည်။ ပထမအဆင့်ခွဲပြီးနောက်စက္ကန့် ၃၀ ခန့်၊ ကြားအဆင့်လက်စွပ်သည်ဒုတိယအဆင့်မှကျဆင်းသွားသည်။ ၎င်းသည်ဆွဲငင်အား၏ဗဟိုချက်အနီးတစ်ဝိုက်ကို ဦး တည်ချက်မဲ့သောသဘောထားဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကြားဖြတ် J-2 အင်ဂျင်များမှ ၃ ပေ ၃ လက်မ (၁ မီတာ) သာရှိသောကြားကာလသည်၎င်းတို့အားမတိုက်ဘဲသန့်ရှင်းစွာလဲကျလိမ့်မည်။ S-IC နှင့်တွဲလျှင် J-2 အင်ဂျင်နှစ်ခုပျက်စီးနိုင်သည်။ ကြားကာလခွဲခွာပြီးမကြာမီ Launch Escape System သည်လည်းအရှိန်ပြင်းလာသည်။
Apollo6ကြားမှအဝေးသို့ပြုတ်ကျသွားသည်။ S-II အဆင့်မှအင်ဂျင်အိတ်ဇောသည် ကြားဖြတ်ရိုက်ခတ်မှုကြောင့် တောက်ပသည်။ ဒုတိယအဆင့်စက်နှိုးပြီးနောက် ၃၈ စက္ကန့်ခန့်တွင် Saturn V သည် ကြိုတင်အစီအစဉ်ဆွဲထားသောလမ်းကြောင်းမှ "ပိတ်ထားသော loop" သို့ Iterative Guidance Mode သို့ပြောင်းခဲ့သည်။ ယခုအခါ၎င်းကိရိယာအား၎င်း၏ပစ်မှတ်ပတ်လမ်းဆီသို့အသက်သာဆုံးလမ်းကြောင်းအဖြစ်အချိန်နှင့်တပြေးညီတွက်ချက်ပေးခဲ့သည်။ အကယ်၍ တူရိယာယူနစ်မအောင်မြင်လျှင် Saturn ၏ထိန်းချုပ်မှုကို command module ၏ကွန်ပျူတာသို့ပြောင်း။ လက်ဖြင့်ထိန်းချုပ်ခြင်း (သို့) ပျံသန်းခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းနိုင်သည်။ ဒုတိယအဆင့်မဖြတ်မီစက္ကန့် ၉၀ ခန့်တွင် longitudinal pogo oscillations ကိုလျှော့ချရန်ဗဟိုအင်ဂျင်သည်ပိတ်သွားသည်။ ဤအချိန်တစ်ဝိုက်တွင် LOX စီးဆင်းမှုနှုန်းကျဆင်းသွားပြီး propellants နှစ်ခု၏အချိုးကိုပြောင်းလိုက်ပြီးဒုတိယအဆင့်ပျံသန်းမှုအဆုံးတွင်တင့်ကားများတွင်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော propellant အနည်းငယ်သာကျန်ရှိတော့ကြောင်းသေချာစေခဲ့သည်။ ၎င်းကိုကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော delta-v တွင်ပြုလုပ်သည်။ S-II propellant tank တစ်ခုစီ၏အောက်ခြေရှိအဆင့်ငါးဆင့်အာရုံခံကိရိယာများသည် S-II ပျံသန်းစဉ်တွင်လက်နက်တပ်ဆင်ထားပြီး၎င်းတို့နှစ် ဦး အား S-II ဖြတ်တောက်မှုနှင့်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဒုတိယအဆင့်ပြတ်ပြီးနောက် တစ်စက္ကန့်ပိုင်းခြားသွားပြီး စက္ကန့်ပိုင်းအကြာတတိယအဆင့်မီးတောက်သွားသည်။ S-IIB ထိပ်မှကြားကြားတွင်တပ်ဆင်ထားသောအစိုင်အခဲလောင်စာသုံး retro-rocket များသည် S-IVB မှကျောထောက်နောက်ခံ ပြု၍ ပစ်ခတ်သည်။ S-II သည်ပစ်လွှတ်သည့်နေရာမှမိုင် ၂,၆၀၀ (ကီလိုမီတာ ၄,၂၀၀) ခန့်ကိုထိခိုက်ခဲ့သည်။ Apollo 13 မစ်ရှင်တွင် စက်အတွင်းပိုင်းအင်ဂျင်သည် အဓိက pogo တုန်ခါမှုဒဏ်ကိုခံလိုက်ရပြီး အစောပိုင်းအလိုအလျောက်ဖြတ်တောက်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ လုံလောက်သောအမြန်နှုန်းရောက်ရန်ကျန်ရှိသောအင်ဂျင်လေးလုံးသည်စီစဉ်ထားသည်ထက်ပိုမိုကြာရှည်စွာလည်ပတ်နေခဲ့သည်။ pogo နှိမ်နင်းသူကိုနောက်ပိုင်း Apollo မစ်ရှင်များတွင်တပ်ဆင်ခဲ့သည်၊ သို့သော်အစောပိုင်းအင်ဂျင် ၅ လုံးဖြတ်တောက်မှုသည် g-force ကိုလျှော့ချရန်ကျန်ရှိခဲ့သည်။
[[Image: Below.jpg မှစ. IU သည်-501 | ညာဘက် | လက်မ | အဆိုပါ စာရွက်စာတမ်းယူနစ် ဟာ အပိုလို4Saturn V ကို] များအတွက်] တန်ဆာယူနစ်] [[ကို IBM ကတည်ဆောက်ခဲ့သည် ] နှင့်တတိယအဆင့်တွင်ပေါ်ကနေစီးသွားခဲ့တယ်။ဒါဟာ Huntsville, Alabama အဘိဓာန်အတွက်အာကာသစနစ်များ Center မှာဆောက်လုပ်ထားခဲ့သည်။S-IVB စွန့်ပစ်ခံခဲ့ရအထိဤကွန်ပျူတာရုံ liftoff ထံတော်မှဒုံးပျံများ၏စစ်ဆင်ရေးထိန်းချုပ်ထား။ဒါဟာဒုံးပျံဘို့လမ်းညွှန်မှုနှင့် ပေးပို့စနစ်များ စနစ်များလည်းပါဝင်သည်။ယင်းအရှိန်နှင့်မော်တော်ယာဉ်သဘောထားကိုတိုင်းတာအသုံးပြုပုံကြောင့်မဆိုသွေဖည်များအတွက်ဒုံးပျံနှင့်မှန်ကန်သောများ၏အနေအထားနှင့်အလျင်တွက်ချက်နိုင်ပါတယ်။
ဒုံးကျည်အားဖျက်သိမ်းရန်လိုအပ်သောအခြေအနေတွင်အကွာအဝေးလုံခြုံရေးအရာရှိသည်အင်ဂျင်များကိုအဝေးမှပိတ်ပစ်လိုက်ပြီးဒုံးကျည်၏အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်များပေါ်တွင်ပုံသဏ္န်တူပေါက်ကွဲစေသောစွဲချက်များအတွက်နောက်ထပ်အမိန့်တစ်ခုပေးပို့ခဲ့သည်။ ဤအရာသည် လောင်စာများကို လျင်မြန်စွာစွန့်ကြဲရန်နှင့် ရောစပ်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်စေရန် လောင်စာဆီနှင့်ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ကန်များကို ဖြတ်တောက်လိမ့်မည်။ ဤလုပ်ရပ်များအကြားခဏရပ်ခြင်းသည် Launch Escape Tower မှတဆင့် (သို့မဟုတ်လေယာဉ်၏နောက်ပိုင်းအဆင့်များတွင်) Service module ၏ တွန်းကန်မှုစနစ်မှ တဆင့်လွတ်မြောက်ရန်အချိန်ပေးပါလိမ့်မည်။ S-IVB အဆင့်မှမိမိကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးသောစနစ်အားနောက်ပြန်လှည့်ရန်လှည့်စားရန်တတိယမြောက်လုံခြုံစိတ်ချရသောတတိယအမိန့်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒုံးပျံသည်ပစ်လွှတ်စင်ပေါ်တွင်ရှိနေသေးသရွေ့ထိုစနစ်သည်အလုပ်မလုပ်ပါ။
Diameter, maximum ၃၃ ft (၁၀ m) ၅၆ ft (၁၇ m)
Height w/ payload ၃၆၃ ft (၁၁၁ m) ၃၄၄ ft (၁၀၅ m)
Gross weight ၆,၄၇၈,၀၀၀ lb (၂,၉၃၈ t) ၆,၀၃၀,၀၀၀ lb (၂,၇၃၅ t)
Thrust, SL ၇,၅၀၀,၀၀၀ lbf (၃၃,၀၀၀ kN) ၁၀,၂၀၀,၀၀၀ lbf (၄၅,၄၀၀ kN)
Thrust, vac ၁,၁၅၅,၈၀၀ lbf (၅,၁၄၁ kN) ၃,၁၆၀,၀၀၀ lbf (၁၄,၀၄၀ kN)
Thrust, vac ၂၀၂,၆၀၀ lbf (၉၀၁ kN) ၃၆၀,၀၀၀ lbf (၁,၆၁၀ kN)
Total impulse ၁.၇၃၃၆×၁၀၉ lbf (၇.၇၁၁×၁၀၆ kN)·s ၁.၇၈၉×၁၀၉ lbf (၇.၉၅၆×၁၀၆ kN)·s
Orbital payload ၂၆၄,၉၀၀ lb (၁၂၀.၂ t) ၂၀၉,၀၀၀ lb (၉၅ t)
Injection velocity ၂၅,၅၆၈ ft/s (၇,၇၉၃ m/s) ၂၅,၅၇၀ ft/s (၇,၇၉၃ m/s)
Payload momentum 2.105×10၈ slug-ft/s (9.363×10၈ kg·m/s) 1.6644×10၈ slug-ft/s (7.403×10၈ kg·m/s)
Thrust, vac ၂၀၁,၁၀၀ lbf (၈၉၅ kN) ၁၀၀,၀၀၀ lbf (၄၄၆ kN)
Total impulse ၁.၈၀၃၄×၁၀၉ lbf (၈.၀၂၂×၁၀၆ kN)·s ၁.၈၃၃×၁၀၉ lbf (၈.၁၅၃×၁၀၆ kN)·s
Translunar payload ၁၀၀,၇၄၀ lb (၄၅.၆၉ t) ၅၂,၀၀၀ lb (၂၃.၅ t)
Injection velocity ၃၅,၅၄၅ ft/s (၁၀,၈၃၄ m/s) ၃၅,၅၄၀ ft/s (၁၀,၈၃၄ m/s)
Payload momentum 1.1129×10၈ slug-ft/s (4.95×10၈ kg·m/s) 5.724×10၇ slug-ft/s (2.546×10၈ kg·m/s)
စင်မြင့်တည်ဆောက်မှုနှင့်မြေပြင်စမ်းသပ်မှုပြီးစီးပြီးနောက်၎င်းကို Kennedy အာကာသစင်တာသို့ပို့ဆောင်ခဲ့သည်။ ပထမအဆင့်နှစ်ခုသည် အလွန်ကြီးမားသဖြင့် ၎င်းတို့အားပို့ဆောင်ရန် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာ လှေဖြင့်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ New Orleans တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သော S-IC ကိုမစ္စစ္စပီမြစ်ကိုမက္ကဆီကိုပင်လယ်ကွေ့သို့သယ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ဖလော်ရီဒါကိုလှည့်ပတ်ပြီးနောက်အဆင့်များကို Intra-Coastal Waterway ကိုမော်တော်ယာဉ်စုဝေးရာအဆောက်အအုံ (မူလအား Vertical Assembly Building ဟုခေါ်သည်) သို့ပို့ဆောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အာကာသလွန်းပျံယာဉ်များအပြင်ဘက်တင့်ကားများကိုနောက်ပိုင်းတွင်အသုံးပြုမည့်လမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းဖြစ်သည်။ S-II ကိုကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တွင် တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ပနားမားတူးမြောင်းမှတဆင့်ဖလော်ရီဒါသို့ခရီးဆက်ခဲ့သည်။ တတိယအဆင့်နှင့်တူရိယာယူနစ်ကို Aero Spaclines Pregnant Guppy နှင့် Super Guppy တို့က သယ်ဆောင်နိုင်သော်လည်း အာမခံရလျှင်လှေဖြင့် သယ်ဆောင်သွားနိုင်သည်။ Vertical Assembly Building သို့ရောက်သောအခါအဆင့်တိုင်းကိုဒေါင်လိုက် ဦး တည်ချက်မပြုမီအလျားလိုက်အနေအထား၌စစ်ဆေးခဲ့သည်။ NASA သည်အထူးသဖြင့်အဆင့်တစ်ခုရွှေ့ဆိုင်းပါက spool ပုံစံအဆောက်အ ဦး ကြီးများကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ဤ spool များသည်တူညီသောအမြင့်နှင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရှိပြီးအမှန်တကယ်အဆင့်များကဲ့သို့တူညီသောလျှပ်စစ်ဆက်သွယ်မှုများပါ ၀ င်သည်။ NASA သည် Saturn V ကို Mobile Launcher (ML) တွင်တပ်ဆင်ပြီးစုဝေးစေခဲ့သည်။ ၎င်းတွင် Launch Umbilical Tower (LUT) ပါ ၀ င်သည့်လွှဲပြောင်းလက်နက် (လေယာဉ်အမှုထမ်းသုံးလက်အပါအ ၀ င်)၊ သံတူကရိန်းနှင့်ရေနှိမ်နင်းရေးစနစ်တို့ပါ ၀ င်သည်။ မဖွင့်ခင်မှာ activated ဖြစ်ခဲ့သည်။ စုဝေးမှုပြီးစီးသွားသောအခါ stack တစ်ခုလုံးကို Vehicle Assembly Building (VAB) မှ Crawler Transporter (CT) ကို သုံး၍ စတင်ထုတ်လုပ်သည်။ Marion Power Shovel Company မှတည်ဆောက်ပြီး (၎င်းနောက်ပိုသေးငယ်။ ပေါ့ပါးသောအာကာသယာဉ်များကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရန်သုံးသည်) CT သည်ခြေနင်း ၅၇ တွဲပါသောခြေနင်းလေးချောင်းပေါ်တွင်အသီးသီးပြေးခဲ့သည်။ ဖိနပ်တိုင်းသည်ပေါင် ၂၀၀၀ (၉၁၀ ကီလိုဂရမ်) ရှိသည်။ ဒီသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်ဒုံးပျံအဆင့်ကို ၃ မိုင် (၄.၈ ကီလိုမီတာ) အကွာအဝေးသို့ပစ်လွှတ်ရန်လိုအပ်ပြီးအထူးသဖြင့်ပစ်လွှတ် pad တွင်တွေ့သော ၃ ရာခိုင်နှုန်းအဆင့်တွင်ရှိသည်။ CT သည် Mobile Service Structure (MSS) ကိုသယ်ဆောင်ပြီးဒုံးကျည်များကိုမလွှတ်မီရှစ်နာရီအထိခွင့်ပြုသည်၊ ၎င်းကို Crawlerway ("VAB နှင့်ပစ်လွှတ်နှစ်ခုအကြားလမ်းဆုံ" သို့တစ်ဝက်) သို့ရွှေ့လိုက်သောအခါ Mobile Service Structure (MSS) ကိုသယ်ဆောင်လာခဲ့သည်။
Saturn V သည်ဖလော်ရီဒါရှိ John F. Kennedy အာကာသစင်တာ၌ Launch Complex 39 မှလွှတ်တင်ခဲ့သော Apollo lunar missions အားလုံးကိုသယ်ဆောင်သွားသည်။ ဒုံးပျံလွှတ်တင်စင်ကိုရှင်းလင်းပြီးနောက်ပျံသန်းမှုထိန်းချုပ်ရေးကို Texas ပြည်နယ် Houston ရှိ Johnson Space Center ရှိ Mission Control သို့လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ ပျမ်းမျှမစ်ရှင်သည်ဒုံးပျံကိုစုစုပေါင်းမိနစ် ၂၀ သာသုံးသည်။ Apollo6သည်အင်ဂျင်သုံးလုံးချို့ယွင်းမှုနှင့် Apollo 13 အင်ဂျင်ပိတ်ခြင်းကို ကြုံခဲ့ရသော်လည်း စက်ရှိကွန်ပျူတာများသည် ပါကင်ပတ်လမ်းသို့ရောက်ရန် ကျန်ရှိသောအင်ဂျင်များကိုကြာရှည်လောင်ကျွမ်းစေခြင်းဖြင့်လျော်ကြေးပေးနိုင်ခဲ့သည်။
၁၉၆၅ တွင် Apollo Applications Program (AAP) ကို Apollo hardware ကို သုံး၍ လုပ်ဆောင်နိုင်သောသိပ္ပံမစ်ရှင်များကိုရှာဖွေရန်ဖန်တီးခဲ့သည်။ စီမံကိန်းအများစုသည်အာကာသစခန်းတစ်ခု၏စိတ်ကူးကိုအဓိကထားသည်။ Wernher von Braun ၏အစောပိုင်း (၁၉၆၄) အစီအစဉ်များသည်အသုံး ၀ င်သော S-II Saturn V ဒုတိယအဆင့်ကိုကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းထဲသို့လွှတ်တင်ပြီးအာကာသတွင်တပ်ဆင်ထားသည်။ နောက်နှစ်တွင် AAP သည် Saturn IB ဒုတိယအဆင့်ကို သုံး၍ သေးငယ်သည့်ဘူတာတစ်ခုကိုလေ့လာခဲ့သည်။ ၁၉၆၉ ခုနှစ်ရောက်သောအခါအပိုလိုရန်ပုံငွေဖြတ်တောက်မှုသည်ပိုပိုအပိုလို hardware များ ၀ ယ်ယူရန်ဖြစ်နိုင်ချေကိုဖယ်ရှားပြီးနောက်ပိုင်းမွန်းဆင်းသက်ပျံသန်းမှုအချို့ကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ရသည်။ ဤအရာသည်အနည်းဆုံး Saturn V ကိုလွတ်မြောက်စေပြီးစိုစွတ်သောအလုပ်ရုံကို "ခြောက်သွေ့သောအလုပ်ရုံ" သဘောတရားနှင့်အစားထိုးခွင့်ပြုသည်။ ယခု (Skylab ဟုခေါ်သော) ဘူတာရုံကိုပိုလျှံစေတန် Saturn IB ဒုတိယအဆင့်မှတည်ဆောက်ပြီးပထမဆုံးတွင်စတင်ခဲ့သည်။ Saturn V. ၏တိုက်ရိုက်အဆင့်နှစ်ဆင့်ဖြစ်သော Saturn V တတိယအဆင့်မှတည်ဆောက်ထားသောအရံစခန်းတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပြီးယခုအခါအမျိုးသားလေကြောင်းနှင့်အာကာသပြတိုက်တွင်ပြသနေသည်။ Skylab သည် Apollo လဆင်းယာဉ်အစီအစဉ်နှင့်တိုက်ရိုက်မသက်ဆိုင်သောတစ်ခုတည်းသောပစ်လွှတ်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ Apollo configurations များမှ Saturn V သို့တစ်ခုတည်းသောသိသာထင်ရှားသည့်အပြောင်းအလဲများသည် Skylab payload ကိုကမ္ဘာပတ်လမ်းထဲသို့ထည့်ရန်နှင့်နောက်ဆုံးအဆင့်မပေါက်ကွဲစေရန်အင်ဂျင်ဖြတ်တောက်ပြီးနောက်ပိုလျှံသောတွန်းကန်များကိုထုတ်လွှတ်ရန်နှင့် S-II သို့ပြင်ဆင်ခြင်းအချို့ပါ ၀ င်သည်။ ပတ်လမ်းမှာ S-II သည်ကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းထဲတွင်နှစ်နှစ်နီးပါးရှိနေခဲ့ပြီး ၁၉၇၅ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက်တွင်အထိန်းအကွပ်မဲ့ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ Skylab သင်္ဘောပေါ်တွင်အမှုထမ်းသုံး ဦး သည်မေလ ၂၅ ရက် ၁၉၇၃ မှဖေဖော်ဝါရီ ၈ အထိ ၁၉၇၄ ခုနှစ်ထိ Skylab သည်ကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်း၌ဆက်လက်တည်ရှိနေခဲ့သည်။
Proposed post-Apollo developments[ပြင်ဆင်ရန်]
Apollo ပြီးနောက် Saturn V သည်ဆိုဗီယက် Lunokhod rover Lunokhod 1 နှင့် Lunokhod2ကဲ့သို့လကမ္ဘာသို့လွှတ်တင်ရန်အဆိုပြုထားသည့် ၃၃၀ ကီလိုဂရမ် (၇၃၀ ပေါင်) စက်ရုပ်ယာဉ်ကို Prospector အတွက်အဓိကပစ်လွှတ်ယာဉ်ဖြစ်ရန်စီစဉ်ခဲ့သည်။ Voyager Mars စူးစမ်းလေ့လာမှု၊ နှင့် Voyager interplanetary probes ၏အဆင့်မြှင့်ထားသောဗားရှင်း ၎င်းသည်နျူကလီးယားဒုံးပျံအဆင့် RIFT စမ်းသပ်မှုအစီအစဉ်နှင့်နောက်ပိုင်း NERVA ဗားရှင်းအချို့အတွက်ပစ်လွှတ်ယာဉ်လည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ Saturn V ကိုအသုံးပြုရန်ဤအစီအစဉ်အားလုံးကိုဖျက်သိမ်းလိုက်သည်၊ ကုန်ကျစရိတ်သည်အဓိကအကြောင်းအရင်းဖြစ်သည်။ NASA Langley ၏ဒါရိုက်တာ Edgar Cortright ကဆယ်စုနှစ်များစွာအကြာတွင် "JPL သည်ကြီးကြီးမားမားချဉ်းကပ်မှုကိုဘယ်သောအခါမှမကြိုက်ဘူး။ သူတို့ကအမြဲငြင်းခုံတယ်။ ငါ Saturn V ကိုသုံးရာမှာ ဦး ဆောင်ထောက်ခံသူဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်၊ ငါရှုံးခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်ကျပျောက်သွားသည်။" ဖျက်သိမ်းလိုက်သောဒုတိယမြောက် Saturn Vs ထုတ်လုပ်မှုကိုပထမအဆင့်တွင် F-1A အင်ဂျင်ကို အသုံးပြုခဲ့ဖွယ်ရှိပြီး စွမ်းဆောင်ရည်သိသိသာသာ တိုးတက်စေခဲ့သည်။ အခြားဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအပြောင်းအလဲများမှာ (၎င်းတို့အလေးချိန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အနည်းငယ်အကျိုးရှိသည်) ထွက်လာသောဆန့် S-IC ပထမအဆင့်နှင့်ပိုမိုအားကောင်းသော F-1As များနှင့် J-2s သို့မဟုတ် M တို့ကိုမြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။ အထက်အဆင့်များအတွက် -1 ။ အခြား Saturn မော်တော်ယာဉ်များကို Saturn V ကို အခြေခံ၍ အဆိုပြုထားသည်၊ Saturn INT-20 မှ S-IVB ဇာတ်စင်နှင့် S-IC စင်မြင့်ပေါ်သို့တိုက်ရိုက်တပ်ဆင်ထားသောကြားကာလမှ Saturn V-23 (L) အထိ ပထမအဆင့်တွင် F-1 အင်ဂျင်ငါးလုံးသာမက F-1 အင်ဂျင်နှစ်လုံးပါ ၀ င်သောသိုးကြိုးလေးချောင်းပါ ၀ င်သည်။ ဒုတိယမြောက် Saturn V ထုတ်လုပ်မှုပြေးဆွဲမှုမရှိခြင်းသည်ဤအစီအစဉ်ကိုသတ်ပစ်ခဲ့ပြီး super heavy-lift လွှတ်တင်ယာဉ်မပါဘဲအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှထွက်ခွာသွားသည်။ အမေရိကန်အာကာသအသိုင်းအဝိုင်းမှအချို့ကအမေရိကန်နှင့်ရုရှားသင်္ဘောနှစ်စင်းစလုံးနှင့် Skylab (သို့) Mir configuration ကို သုံး၍ နိုင်ငံတကာအာကာသစခန်းအားဆက်လက်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ဤအခြေအနေကို ၀ မ်းနည်းလာသည်။ Saturn-Shuttle သဘောတရားသည် ၁၉၈၆ တွင် Challenger မတော်တဆမှုကိုဖြစ်စေသော Space Shuttle Solid Rocket Boosters များကိုဖယ်ရှားပစ်လိမ့်မည်။
၁၉၅၀ နှောင်းပိုင်းမှ ၁၉၈၀ အစောပိုင်းများအထိ ၁၉၈၀ အစောပိုင်းများမှ Saturn V ထက်ပိုကြီးသောဒုံးကျည်အတွက်အမေရိကန်၏အဆိုပြုချက်ကိုယေဘူယျအားဖြင့် Nova ဟုခေါ်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောဒုံးပျံအဆိုပြုချက်သုံးဆယ်ကျော်သည် Nova အမည်ကိုသယ်ဆောင်ခဲ့သော်လည်းမည်သည့်အရာမှမတီထွင်ခဲ့ပါ။ Wernher von Braun နှင့်အခြားသူများသည် Saturn C-8 ကဲ့သို့၎င်း၏ပထမအဆင့်တွင် F-1 အင်ဂျင်ရှစ်လုံးပါ ၀ င်မည့်ဒုံးပျံအတွက်အစီအစဉ်များရှိခဲ့ပြီးလပေါ်သို့တိုက်ရိုက်ပျံတက်ခွင့်ရခဲ့သည်။ Saturn V အတွက်အခြားအစီအစဉ်များမှာ Centaur ကိုအပေါ်ဆုံးအဆင့်အဖြစ်အသုံးပြုရန်သို့မဟုတ်သိုင်းကြိုးပါ ၀ င်အားမြှင့်များထည့်ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ဤတိုးတက်မှုများကြောင့် စက်ရုပ်အာကာသယာဉ်ကို အပြင်ဘက်ဂြိုဟ်များသို့ လွှတ်နိုင်သလိုအင်္ဂါဂြိုဟ်သို့အာကာသယာဉ်မှူးများ စေလွှတ်နိုင်လိမ့်မည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာခဲ့သောအခြား Saturn V နိယာမများတွင် Saturn MLV မိသားစုသည် Modified Launch Vehicles ၏စံနှုန်း Saturn V ၏ payload lift စွမ်းရည်ကိုနှစ်ဆနီးပါးမြှင့်တင်ပေးပြီး ၁၉၈၀ တွင် အင်္ဂါဂြိုဟ်သို့လျာထားသောမစ်ရှင်၌ သုံးရန်ရည်ရွယ်ထားသည်။ ၁၉၆၈ ခုနှစ်တွင်ဘိုးရင်းသည်ယာဉ်၏တတိယအဆင့်အတွက်နျူကလီးယားအပူဒုံးပျံအင်ဂျင်ပါ ၀ င်သော Saturn-V ဆင်းသက်လာသောအခြား Saturn C-5N ကိုလေ့လာခဲ့သည်။ Saturn C-5N သည် interplanetary အာကာသပျံသန်းမှုအတွက်သိသိသာသာပိုကြီးသောဝန်ကိုသယ်ဆောင်လိမ့်မည်။ Saturn V ELV များအားလုံးနှင့်အတူနျူကလီးယားအင်ဂျင်များပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ခြင်းသည် ၁၉၇၃ တွင်ပြီးဆုံးခဲ့သည်။ Comet HLLV သည် ၁၉၉၂ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၃ ခုနှစ်အာကာသစူးစမ်းလေ့လာရေးပဏာမအရဒီဇိုင်းအဆင့်တွင်ပထမဆုံး Lunar Outpost အစီအစဉ်အတွက်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောကြီးမားသောလေးလံသောလွှင့်ပစ်ယာဉ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Saturn V မှလွှတ်တင်သောယာဉ်ဖြစ်ပြီး payload စွမ်းရည်နှစ်ဆကျော်နှင့်ရှိပြီးသားနည်းပညာကိုလုံးလုံးလျားလျားမှီခိုလိမ့်မည်။ အင်ဂျင်အားလုံးသည်၎င်းတို့၏ Apollo counterparts များ၏ခေတ်မီဗားရှင်းများဖြစ်ပြီးလောင်စာကန်များဆွဲဆန့်လိမ့်မည်။ ၎င်း၏အဓိကပန်းတိုင်မှာပထမဆုံး Lunar Outpost အစီအစဉ်နှင့်အနာဂတ်လူလိုက်ပါမည့် Mars မစ်ရှင်များကိုထောက်ပံ့ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုတတ်နိုင်သမျှဈေးသက်သက်သာသာနှင့်လည်ပတ်ရန်လွယ်ကူစေရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင်အဆိုပြုကြယ်စုအစီအစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် NASA သည် Shuttle Derived Launch ယာဉ်နှစ်စင်းဖြစ်သော Ares I နှင့် Ares V တို့ကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပြီးအစီအစဉ်များကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ ဒုံးပျံနှစ်စင်းသည်ကွဲပြားခြားနားသောတာဝန်များအတွက်ယာဉ်တစ်စီးစီကိုအထူးပြုခြင်း၊ အမှုထမ်းလွှတ်တင်ခြင်းအတွက် Ares I နှင့်ကုန်တင်သင်္ဘောများအတွက် Ares V တို့အတွက်လုံခြုံမှုကိုတိုးမြှင့်ရန်ရည်ရွယ်သည်။  စေတန်ဂြိုဟ်အားကိုးကွယ်သော Ares V ၏မူလဒီဇိုင်းသည်အမြင့် ၃၆၀ ပေ (၁၁၀ မီတာ) ရှိပြီးအချင်း ၂၈ ပေ (၈.၄ မီတာ) ရှိသောအာကာသယာဉ်များအပြင်ဘက်တင့်ကားကို အခြေခံ၍ အမာခံအဆင့်ကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ ) ့။ ၎င်းကို RS-25 ငါးစီးနှင့်အာကာသလွန်းပျံယာဉ်အစိုင်အခဲ Rocket Boosters (SRBs) ငါးလုံးပါနှစ်ခုဖြင့်မောင်းနှင်ရန်ဖြစ်သည်။ ဒီဇိုင်းပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှ RS-25 အင်ဂျင်များကို Delta IV တွင်သုံးသောတူညီအင်ဂျင်များဖြစ်သော RS-68 အင်ဂျင် ၅ လုံးနှင့်အစားထိုးခဲ့သည်။ RS-25 မှ RS-68 သို့ပြောင်းခြင်းသည်ဈေးနှုန်းသက်သာခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ရန်ရိုးရှင်း။ RS-25 ထက်ပိုမိုအားကောင်းသောကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချရန်ရည်ရွယ်ခဲ့သော်လည်း RS-68 ၏စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ကျမှုသည်တိုးမြင့်ရန်လိုအပ်သည်။ core stage diameter သည် ၃၃ ပေ (၁၀ မီတာ)၊ Saturn V ၏ S-IC နှင့် S-II အဆင့်များကဲ့သို့တူညီသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် NASA သည် Ares V ကိုပြန်လည်ဒီဇိုင်းဆွဲကာ core stage ကိုရှည်အောင်ဆဋ္ဌမ RS-68 အင်ဂျင်ကိုထည့်လိုက်ပြီး SRBs များကို 5.5 segments တစ်ခုစီသို့တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ဤယာဉ်သည်အမြင့် ၃၈၁ ပေ (၁၁၆ မီတာ) ရှိမည်ဖြစ်ပြီးဓာတ်လှေကားမှာ Saturn V သို့မဟုတ် Soviet Energia ထက် ၈၉၀၀၀၀ ပေါင် (၄၀ MN) ခန့်ပိုထုတ်နိုင်လိမ့်မည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ပေါင် ၄၀၀၀၀၀ (၁၈၀ တန်) ကိုကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းအတွင်းထည့်သွင်းရန် Ares V သည် Saturn V ကို payload စွမ်းရည်ထက်ကျော်လွန်လိမ့်မည်။ အထက်အဆင့်ဖြစ်သော Earth Departure Stage သည်ပိုမိုအဆင့်မြင့်သော J-2 အင်ဂျင်ဖြစ်သော J-2X ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။ Ares V သည် Altair လဆင်းယာဉ်ကိုကမ္ဘာမြေပတ် ၀ န်းကျင်သို့နိမ့်ကျစေလိမ့်မည်။ Ares I တွင် Altair နှင့်တွဲထားမည်ဖြစ်သော Orion အဖွဲ့သားယာဉ်သည်လွှတ်တင်ပြီး Earth Departure Stage မှပေါင်းစပ်ထားသော stack ကိုလသို့ပို့ဆောင်လိမ့်မည်။ Constellation အစီအစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းပြီးနောက် Ares I နှင့် Ares V တို့သည် NASA မှ Space Low Launch System (SLS) လေးလံသောဓာတ်လှေကားကိုလွှတ်တင်ခဲ့သည်။ မူလ Ares V သဘောတရားနှင့်ဆင်တူသည့် SLS ကို RS-25 အင်ဂျင်လေးလုံးနှင့်ငါးပိုင်းခွဲ SRBs နှစ်ခုတို့ဖြင့်မောင်းနှင်လိမ့်မည်။ ၎င်း၏ Block 1 ပုံစံသည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ပေါင် ၂၀၉၀၀၀ (၉၅ t) ကို LEO သို့တက်လိမ့်မည်။ Block 1B သည် payload capacity ကိုမြှင့်တင်ရန် RL10 အင်ဂျင်လေးလုံးပါသော Exploration Upper Stage ကိုထည့်သွင်းလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးတွင် Block2မူကွဲသည်အဆင့်မြင့် boosters များသို့အဆင့်မြှင့်တင်ပြီး LEO payload ကိုအနည်းဆုံးပေါင် ၂၉၀,၀၀၀ (၁၃၀ တန်) သို့တိုးတက်စေလိမ့်မည်။ အဆင့်မြင့် boosters များအတွက်အဆိုပြုချက်တစ်ခုသည် Saturn V's F-1, F-1B မှဆင်းသက်လာပြီး SLS payload ကိုပေါင် ၃၃၀,၀၀၀ ပေါင် (၁၅၀ t) အထိ LEO သို့တိုးမြှင့်ပေးလိမ့်မည်။ F-1B သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောတိကျသောတွန်းအားရှိရန်နှင့် F-1 ထက်ပိုမိုဈေးသက်သက်သာသာ ရှိ၍ ပိုမိုလွယ်ကူသောလောင်ကျွမ်းစေသောအခန်းနှင့်အင်ဂျင်အစိတ်အပိုင်းများပါ ၀ င်သည်။ (6.9 MN) ရင့်ကျက်သော Apollo 15 F-1 အင်ဂျင်၊ Huntsville ရှိ Marshall Space Flight Center မှ NASA SLS ၏လက်ထောက်ပရောဂျက်မန်နေဂျာ Jody Singer က ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်အာကာသယာဉ်သည်ပစ်လွှတ်မှုကုန်ကျစရိတ်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ဒေါ်လာသန်း ၅၀၀ ခန့်ရှိလိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
၁၉၆၄ မှ ၁၉၇၃ အထိစုစုပေါင်းဒေါ်လာ ၆.၄၁၇ ဘီလျံ (၂၀၁၉ တွင်ဒေါ်လာ ၃၅ ဘီလီယံနှင့်ညီမျှသည်) ကို Saturn V ၏သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ပျံသန်းမှုအတွက်အများဆုံးထောက်ပံ့ခဲ့ပြီး ၁၉၆၆ တွင်အများဆုံးဒေါ်လာ ၁.၂ ဘီလီယံ (၂၀၁၉ တွင်ဒေါ်လာ ၇.၃၇ ဘီလီယံနှင့်ညီမျှသည်) ။ ထိုနှစ်မှာပင် NASA သည်၎င်း၏အကြီးမားဆုံးဘတ်ဂျက်ဒေါ်လာ ၄.၅ ဘီလီယံကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ထိုအချိန်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏စုစုပေါင်းပြည်တွင်းထုတ်ကုန် (ဂျီဒီပီ) ၀.၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့် နောက်ဆုံး Apollo မစ်ရှင်သုံးခုကိုဖျက်သိမ်းခြင်းအတွက်အကြီးဆုံးအကြောင်းအရင်းနှစ်ခုမှာ Saturn V နှင့်ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲများတွင်အကြီးအကျယ်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများဖြစ်ပြီး ၁၉၆၉ ခုနှစ်မှ ၁၉၇၁ ခုနှစ်ကာလအတွင်း၌အမေရိကန်မှငွေများနှင့်သယံဇာတများကိုအမြဲလိုလိုတိုးပွားလာစေခဲ့သည်။ Saturn V Apollo မစ်ရှင်သည်ဒေါ်လာ ၁၈၅,၀၀၀,၀၀၀ မှဒေါ်လာ ၁၈၉,၀၀၀,၀၀၀ ကြားရှိပြီး၎င်းအားယာဉ်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်ဒေါ်လာသန်း ၁၁၀ (၂၀၁၉ တွင်ဒေါ်လာ ၁.၀၁ ဘီလီယံမှဒေါ်လာ ၁.၀၃ ဘီလီယံနှင့်ညီမျှသည်)။
Saturn V vehicles and launches[ပြင်ဆင်ရန်]
Facilities integration Used to check precise fits and operations of facilities
beforeaflight model was ready. First stage scrapped,
second stage converted to S-II-F/D, third stage whereabouts unknown.
Dynamic testing Used to evaluate the systems' response to vibrations.
On display at the U.S. Space & Rocket Center, Huntsville, Alabama 
Apollo4November 9, 1967 First test flight (unmanned), complete success
Apollo6April 4, 1968 Second test flight (unmanned), with some serious
second and third stage problems occurring
Apollo 8 December 21, 1968 First manned flight of Saturn V, first manned lunar orbit
Apollo 11 July 16, 1969 First manned lunar landing, at Mare Tranquillitatis
Apollo 12 November 14, 1969 Second manned lunar landing, near site of Surveyor3at Mare Cognitum.
Vehicle was struck twice by lightning shortly after liftoff with no serious damage.
Apollo 13 April 11, 1970 Severe, near catastrophic pogo oscillations in second stage
caused early center engine shutdown. Service Module O2 tank rupture
caused mission abort en route to moon, crew saved.
Apollo 14 January 31, 1971 Third manned lunar landing, near Fra Mauro
Apollo 15 July 26, 1971 Fourth manned lunar landing, first Lunar Roving Vehicle, at Hadley-Apennine
Apollo 16 April 16, 1972 Fifth manned lunar landing, at Descartes
Apollo 17 December 6, 1972 Sixth and final manned lunar landing, at Taurus-Littrow.
First and only night launch
Skylab 1 May 14, 1973 Two-stage Skylab version (Saturn INT-21).
The third stage (S IV-513) was replaced for flight by the Skylab module
and is on display at Johnson Space Center.
Unused Designated but never used for Apollo 18 or 19.
First stage (S-IC-14) on display at Johnson Space Center,
second and third stage (S-II-14,S-IV-14) on display at Kennedy Space Center.
Unused Designated but never used asabackup Skylab launch vehicle.
The first stage is on display at Michoud Assembly Facility.
The third stage was converted toabackup Skylab orbital workshop
and is on display at the National Air and Space Museum.
Saturn V displays[ပြင်ဆင်ရန်]
Huntsville ရှိ US Space & Rocket Center တွင်နှစ်ယောက်
SA-500D သည်၎င်း၏ S-IC-D, S-II-F/D နှင့် S-IVB-D တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောအလျားလိုက် display ပေါ်တွင်ရှိသည်။ ဒါတွေအားလုံးဟာလေယာဉ်ပျံအတွက်ရည်ရွယ်တာမဟုတ်တဲ့စမ်းသပ်မှုအဆင့်တွေပါ။ ၁၉၆၉ မှ ၂၀၀၇ ခုနှစ်အတွင်းဤယာဉ်ကိုအပြင်ဘက်တွင်ပြသခဲ့ပြီးပြန်လည်သိမ်းဆည်းခဲ့ပြီးယခုအခါ Davidson အာကာသစူးစမ်းလေ့လာရေးစင်တာ၌ပြသထားသည်။
ဒေါင်လိုက်ပြသမှု (ပုံစံတူ) ကို ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီးဘေးချင်းကပ်လျက်နေရာတွင်တည်ရှိသည်။
Johnson Space Center တွင် SA-514 မှပထမအဆင့်၊ SA-515 မှဒုတိယအဆင့်နှင့် SA-513 မှတတိယအဆင့် (Skylab အလုပ်ရုံမှအစားထိုးပျံသန်းရန်) ၁၉၇၇ နှင့် ၁၉၇၉ အကြားအဆင့်များနှင့်အတူ၎င်းကိုအကာအကွယ်အတွက်အဆောက်အ ဦး တစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးသောအခါ ၂၀၀၅ ခုနှစ်ပြန်လည်မွမ်းမံချိန်အထိ၎င်းကိုပြသထားသည်။ ၎င်းသည်လွှတ်တင်ရန်ရည်ရွယ်ထားသောအဆင့်များလုံး ၀ ပါဝင်သောတစ်ခုတည်းသော display Saturn ဖြစ်သည်။
Kennedy Space Center Visitor Complex တွင် S-IC-T (စမ်းသပ်မှုအဆင့်) နှင့် SA-514 မှဒုတိယနှင့်တတိယအဆင့်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ၎င်းကိုဆယ်စုနှစ်များစွာအပြင်ဘက်တွင်ပြသခဲ့ပြီး ၁၉၉၆ တွင် Apollo/Saturn V စင်တာရှိဒြပ်စင်များမှကာကွယ်မှုကို ၀ န်းရံခဲ့သည်။
SA-515 မှ S-IC အဆင့်ကို Mississippi ရှိ Infinity Science Center တွင်ပြသထားသည်။
SA-515 မှ S-IVB အဆင့်ကို Skylab အတွက်အရံအဖြစ် သုံး၍ ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးဝါရှင်တန်ဒီစီရှိအမျိုးသားလေကြောင်းနှင့်အာကာသပြတိုက်တွင်ပြသသည်။
↑ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named serialnote
↑ ၃.၀ ၃.၁ Includes S-II/S-IVB interstage
↑ ၄.၀ ၄.၁ Includes Instrument Unit
Wikimedia Commons တွင် Saturn V နှင့် ပတ်သက်သော မီဒီယာ ရှိသည်။
Three Saturn Vs on Display Teach Lessons in Space History Archived 23 June 2019 at the Wayback Machine.
Declassified 1964 NASA technical memo on Saturn Rocketsတမ်းပလိတ်:Dl Note that this isalarge PDF file (61 Megabytes)
Saturn I-IVB Stage[လင့်ခ်သေ]
Blog about Apollo 11 mission
3D Saturn V Explorer and Launch Simulation Program Archived 10 January 2016 at the Wayback Machine.
3D Apollo Simulator with Saturn V Simulation Program Archived 28 December 2014 at the Wayback Machine.
↑ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named budget
↑ SP-4221 The Space Shuttle Decision- Chapter 6: Economics and the Shuttle။ NASA။
↑ ၄.၀ ၄.၁ ၄.၂ Ground Ignition Weights။
↑ Alternatives for Future U.S. Space-Launch Capabilities (PDF)၊ The Congress of the United States. Congressional Budget Office၊ October 2006၊ pp. X, 1, 4, 9
↑ Thomas P. Stafford (1991)၊ America at the Threshold – Report of the Synthesis Group on America's Space Exploration Initiative၊ p. 31
↑ Saturn V: Apollo 11 mission, in Orloff, Richard W (2001). Apollo By The Numbers: A Statistical Reference, "Launch Vehicle/Spacecraft Key Facts". NASA. in PDF format. Retrieved on 2008-02-19. Published by Government Reprints Press, 2001, ISBN 1-931641-00-5.
↑ ၈.၀ ၈.၁ Neglects first stage thrust increase with altitude
↑ Includes mass of Earth departure fuel
↑ ၁၀.၀ ၁၀.၁ Assumed identical to Saturn V value
↑ ၁၁.၀ ၁၁.၁ ၁၁.၂ ၁၁.၃ Three Saturn Vs on Display Teach Lessons in Space History။ NASA။ 23 June 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ February 10, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=စေတန်_၅&oldid=699890" မှ ရယူရန်
၁၉၆၇ ရှိ အာကာသပျံသန်းရေး
ဤစာမျက်နှာကို ၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၅:၄၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။